Hhayi ngaso sonke isikhathi izimo ophilayo ezakhamizi zethu nabo ukuze bathole kudingekile imvume ingaphakathi. Kulesi simo, ukhetho ekahle kungaba ifenisha Amatebhe. kuyo Small kuphoqelela bazali okwakudingeka sibonise izimangaliso ukuhlakanipha kanye ngeso lengqondo, ukuthenga ngomumo eyenziwe noma ngezandla zakhe ingane embhedeni-transformers. Ngokungangabazeki, khona ifenisha enjalo kuzokusiza ekuxazululeni izinkinga nge isikhala efulethini elincane. Wezingane emibhedeni yabantu-Transformers ayatholakala izinhlobo eziningi, futhi namuhla sifuna ukwethula kini ukuba ezithakazelisa kakhulu babo.
Ilindele kokuzalwa komntwana wakhe wokuqala, womkhaya osemncane bavame ukucabanga ngale umbuzo yini ukuthenga indlwana ehlala ingane ngangokunokwenzeka inqobo. Yiqiniso, amehlo abazali abasha abaphendukela maqondana amamodeli obusebenzayo kakhulu, futhi lokhu, yebo, zezingane embhedeni-transformers. Ngokuthenga isibonelo sokuba ingane yakho, abazali bangaqiniseka ukuthi izothatha iminyaka eminingi. Ngokuvamile, lezi cribs izinsana hlanganisa embhedeni, ekushintsheni itafula, sokumelela amashidi nezingubo zokugqoka zezingane, ibhokisi ukugcina amathoyizi. Kafushane, kuba igumbi izingane ezincane sika, bahlangana indlwana wosayizi omncane.
Kancane kancane, njengoba ukukhula womntwana, uzoshabalala isidingo ekushintsheni itafula futhi umntwana embhedeni kusukela eminyakeni emi-2 ukwandisa kakhulu ngobukhulu. ukuguqulwa okunjalo elilodwa ebhentshini elingaphansi kwesinye kuyoba interesting nje kuphela abazali kodwa futhi ingane yabo abasebasha.
abakhiqizi Modern ukukhiqiza eyingqayizivele kakhulu cribs Transformers, okuyinto zingaphendulwa zibe yizindawo yokuhlanganela umbhede nentombazana esencane nge-computer noma kwedeski, umfundi engangisidinga kakhulu.
Futhi uma emndenini wakho bakhulise ezimbili ingane ethile, cishe ngeke abe nesithakazelo cribs transformers embhedeni. Uma endaweni ingane kuyivumela, ungasebenzisa lezi imihlobo imibhede njalo ezimbili, kodwa uma ikamelo sincane kakhulu, ukuze wonge isikhala, kungcono ukusebenzisa imodeli ezimbili abaphuma.
Bonke abazali iphupho ingane yabo ukuze bephila ngokunethezeka uma beqhathaniswa nenala, ngeshwa, akuzona zonke amandla ukunikeza wayefisa izimo zokuphila ingane. Labo abazali abakwaziyo ukujabulisa isipho sakho sokuqala ingane, sifuna ukwethula ingane embhedeni umshini.
Akekho bangase baphikise ngokuthi izwe yezingane - izwe elehlukile, eligcwele ngokuvumelana nenjabulo. Futhi lokhu ezweni iqala egumbini lapho ingane yakho luyokhula. Kusukela lokho uyogcwala kakhulu axhomeke esimweni kwakhe okwalandela, ubudlelwano bakhe nontanga kanye nabantu abadala. Uma ufuna ingane yakho ukuba siphile Fairy emhlabeni eliqhakazile ebuntwaneni, amnike embhedeni ngesimo imishini. Kukhona onobuhle eziningi ezikhiqizwa kwamanye manje - futhi lokhu racing car emangalisa, ezemidlalo imoto, futhi umshini sokuba namantombazane njalo, cute isitimela noma engibaziyo ukhululekile elikhanyayo nenhle.
Wezingane emibhedeni yabantu-Transformers abakwazi kuphela wonge isikhala, kodwa futhi ukwenza umhlaba umntanakho indaba elikhanyayo.
Ukugqoka itafula lokulala: endaweni bona
Wicker esihlalweni: izici ukusebenza
Ishadi Lezingubo Engingazigqoka - amabili alo for ekhaya kanye nehhovisi
Corner emashalofini - elula futhi enza izinto ezihlukahlukene kusistimu yesitoreji
Ukwelashwa yezihlahla ekwindla. Sishaye izihlahla ekwindla
Kuhle amahhotela Kaluga: kuzibuyekezo, izintengo, amakheli kanye nezithombe
Februwari 11 amaqembu, imicimbi ekhethekile
Udinga isifundi kuhle "Android"? Khetha kusuka phakathi best
Indlela yokuvula i-IP? Imfundo yesinyathelo ngesinyathelo sabaqalayo
Unyaka omusha imikhonzo abalingani kanye nozakwabo